कुन शरीरिक समस्यामा कुन जुस ठिक ? - Jagaran Post
कुन शरीरिक समस्यामा कुन जुस ठिक ?
जागरणपोस्ट २७ पुष २०७७, सोमबार १०:०७
एजेन्सी : मान्छेले रोग अनुसारको ओखती र खानेकुरा खानु जरूरी हुन्छ । यसैगरी कुनै पनि रोग वा स्वास्थ्य समस्यामा विचार गरेर जुस पिउनु उपयुक्त मानिन्छ । कुन रोग लाग्दा कुन जुस पिउँदा राम्रो मानिन्छ हेर्नुहोस् ।
भोक नलाग्ने मान्छेले बिहान खाली पेट कागतीपानी खानुपर्छ अनि खानुअघि अदुवाको पेस्टमा बीरेनुन हालेर खानुपर्छ । शरीरमा रहेको रगतलाई शुद्ध बनाउनका लागि कागती, गाजर, काउली, पालुंगो, स्याउ, तुलसी र बेलका पातहरूको रस लाभदायक हुन्छ ।
त्यस्तै दमको रोगीले लसुन, अदुवा, तुलसी, काउली, गाजरको सुप र मुँगको दाल अनि बाख्रीको दूध खाँदा फाइदा पुग्छ भने उच्च रक्तचापका रोगीहरूले गाजर, अंगुर र मौसमको जुस पिउनुपर्छ ।
त्यसैगरी लो ब्लडप्रेसर भएकाहरूले गुलिया फल जस्तै अंगुर र मौसमको रस पिउनुपर्छ र अमिलो फलको रस पिउनुहुँदैन । जन्डिस हुँदा रोगीले अंगुर, स्याउ र मौसमको रस पिउनुपर्छ । किसमिस डुबाएको पानीले पनि राम्रो गर्छ ।
अनुहारको दाग हटाउनका लागि गाजर, खरबुजा, प्याज, तुलसी र पालुंगोको रस लाभदायी मानिन्छ भने क्यान्सरबाट मुक्तिका लागि गाजर र अंगुरको रस पिउनु राम्रो हुन्छ ।
सशस्त्रको अस्पतालमा सडक मानवलाई निःशुल्क उपचार
भारतको सेरम इन्स्टिच्युटमा भएको आगलागीमा कोरोना खोप सुरक्षित
कस्ता बिरामीका लागि तितेकरेला हानिकारक हुन्छ ?
कोरोनाका कारण थप सात जनाको मृत्यु
कोरोना विरुद्धको खोपले समस्या देखिए खर्च सरकारले बेहोर्ने
भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्यो १० लाख डोज कोरोना